Akwukwo Mbelata Taxtụ Taxtụ Isi na Nzukọ Ezumezu Ndị Ọzụzụ Sitere n’aka
Companieslọ ọrụ Incorporated achọpụtala na mmadụ asatọ n'ime mmadụ iri ọhaneze anaghị anachapụ ego niile, ma ọ bụ nzere, ma ọ bụ ikike aka ha ruru eru nke ndị IRS. Ya mere, anyị na-enye ndị ahịa anyị mmemme otu ebe anyị na-arụ ọrụ aka na ndị ọkachamara ụtụ isi mba na iwu ụlọ ọrụ na koodu ụtụ iji nyere ha aka ibelata ụtụ isi ha ruo oke nke iwu kwadoro.
Anyị ga-ekenye gị onye na-ahụ maka ụtụ isi, onye na-ahụ maka azụmaahịa, na atụmatụ ụlọ ọrụ maka nkwado na ịgakwuru ndị na-akparaghị ókè. Otu a ga - anọnyere gị ọ bụghị naanị n'oge ụtụ, kama oge niile ị bụ onye ahịa na anyị.
Nyocha banyere afọ abụọ ụtụ isi maka ụtụ isi ga-eduzi n'ụlọ ọrụ nke Robert J. Greene, CPA na Dennis P. Skea, ndị rụrụ ọrụ 28 afọ dị ka onye nnọchi anya IRS dị elu.
N'ihi nke a, iwu nyere anyị ka idozigharị ụtụ isi gara aga ruo afọ atọ ọ bụrụ na ọnọdụ gị chọrọ nke a ma nweta dollar ụtụ isi ị kwụgoro IRS. Ọtụtụ ndị na-akwado ụtụ na-etinye nọmba na igbe na mpempe ụtụ, mana anyị n’ewetara gị usoro atụmatụ ụtụ isi iji belata ibu ụtụ gị ma debe ego n'aka gị.
Site na inyocha ego gị na koodu ụtụ isi anyị nwere ike hụ na ị na-akwụ ụtụ nke kacha ala. Ọ bụrụ na anyị anaghị azọpụta gị $ 3,000 na nloghachi gị, enweghị ụgwọ ọ bụla.
Site na usoro ịgba akwụkwọ na nyocha nlezianya nyocha nke nyocha nke otu ndị ọkachamara IRS mbụ mere, ị ga-enweta nwepu ego ọ bụla gbasara iwu, kredit ma gụpụ ya ma bulie ndị ide iwu iwu na enweghị ngbanwe nyocha nke nloghachi gị.
Na mgbakwunye, anyị na-enye ọrụ nkwadebe ụtụ maka 80% nke ndị ahịa anyị na-enye ọrụ.
Anyị ga-ezitere gị akwụkwọ mmụta akwụkwọ a ga-eji na njikọ ya na ọrụ ahụ.
Ngalaba nka na ụzụ ụtụ na - enye ndị ahịa anyị nchekwa odide. Ọ bụrụ na-amara gị ọkwa banyere ụdị nyocha ọ bụla, anyị ga-anọchite anya gị n'enweghị ụgwọ ọ bụla.
Ozo ma oburu na anyi azoputaghi gi $ 3,000 na ụtụ isi anyị ga-akwụghachi ụgwọ ọrụ ọrụ anyị, anyị ga-ekwe nkwa nke a ọnwa iri na abụọ.
Ourgwọ anyị erughị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ego mkpuchi echekwara $ 995 na afọ mbụ. Ọ bụrụ na i kwekwara ka anyị na-arụ ọrụ ụtụ isi azụmahịa gị anyị na-ekwe nkwa idobe ego echekwara na $ 5,000 nke $ 1,495. Will ga-amụta usoro ịbelata ụtụ isi nke nwere ike ịdị ogologo ndụ gị niile.
Iji denye aha na usoro mbelata ụtụ isi, kpọọ otu n'ime ndị ndụmọdụ anyị na 800-830-1055.